Kedu vitamin ị nwere ike ịdoụbiga mmanya ókè? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ọtụtụ vitamin nwere ike igbu gị - azịza yana azịza ndị edepụtara
Ọtụtụ vitamin nwere ike igbu gị - azịza yana azịza ndị edepụtara
Kedu vitamin ị nwere ike ịdoụbiga mmanya ókè?
Dwyer kwuruvitaminD, calcium, na folic acid bụ ihe oriri atọgịnwere ike ịnweta nke ukwuu, ọkachasị site na mgbakwunye. Ndị okenye na-agakarị karịa 4,000 nke ụwa (IU) kwa ụbọchị dị elu dị elu makavitaminD nwere ike ịdaba na nsogbu obi siri ike.Apr 2 2014
Iri otu karọt kwa ụbọchị ga-enye vitamin A niile ịchọrọ ịdị ndụ. Ma n’akụkụ ụfọdụ nke ụwa ọ dịghị mfe. E nwere ihe e mere atụmatụ ya ka ọ bụrụ nde ụlọ akwụkwọ praịksị 250 nde na-enweghị vitamin A, ọtụtụ n’ime ha bi n’Africa na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, dị ka ebe a n’India.
N'ime ndị a, ihe dị ka 250,000 ruo 500,000 enweghị nnukwu vitamin A. Mgbe nke ahụ mere, ha kpuru ìsì n'abalị, nke pụtara na ha anaghị ahụ ụzọ nke ọma mgbe anyanwụ dara. Ugbu a, ọ bụrụ na ị rịa ọrịa a wee nye nwatakịrị ọgwụ ole na ole dị elu vitamin A, enwere ike weghachite anya ha n'ime 24 ruo 48 awa.
Ọ dị ka ọnọdụ ọgwụgwọ ọrụ ebube nwere ike ịka njọ ruo mgbe ha kpuru ìsì kpamkpam. N'ime ụmụaka ahụ kpuru ìsì kpamkpam, ihe dị ka ọkara ga-anwụ n'ime ọnwa iri na abụọ na-esote. Ihe ndị a niile bụ ihe m mụtara mgbe m na-arụ ọrụ onyonyo ọhụụ nke akpọrọ Vitamania. , ihe nile gbasara uche na ihe nzuzu nke vitamin.
Ọbụghị naanị na m na - eme ihe ngosi a, m sokwa na ndị na - emekọ ihe ọnụ. You nwere ike ile ihe nkiri a ugbu a. Ọ na-ebi na weebụ maka ụwa niile ma e wezụga France na Germany n'ihi na ọ na-abịa TV gị.
Ma m ga-etinye njikọ ya, 'Vitamania the Movie', na nkọwa na ebe a. Achọrọ m igosi gị ụgbọala na-adọkpụ maka ihe nkiri a ka ị wee nwee mmetụta maka etu ọ dị, ihe ọ dị. Anọ m na-arụ ọrụ na nke a afọ abụọ na ọkara ka m wee nwee obi ụtọ na ya ma achọrọ m ka ị hụ ya.
Yabụ ebe a bụ ụgbọala na-adọkpụ. Na 1913 ndị nyocha Antarctic bụ Douglas Mawson na Xavier Mertz lụrụ ọgụ maka nkịta ndụ ha, ma ọ bụ nwụọ. Mgbe ha richara nkịta ha rie nri, ụmụ nwoke ahụ malitere ịrịa ọrịa.
N’ụbọchị ole na ole, Mertz nwụrụ. N'agbanyeghị nsogbu niile ahụ, Mawson laghachiri n'ụlọikwuu. Mawson ọ fọrọ obere ka ọ nwụọ? Ha rie nkịta ha, ọ bụghị naanị anụ nkịta na abụba ka ha riri.
Ha riri imeju nkịta ahụ, nke dị na vitamin A. Ya mere, ọ bụ n'ụzọ dị ukwuu dị ka hypervitaminosis A. Hypervitaminosis A dị obere ma na-egbu egbu, ma taa anyị maara na enwere ike ibute ya site n'iji ọgwụ vitamin A dị elu eme ihe - otu ụdị mmeju ihe oriri na-eme ka mmadụ nwee ike ịhụ ụzọ Zọpụta nwata.
Ike a na mgbagwoju anya di na obi akuko akuko banyere vitamin. M na-amalite otu epic, ọmụmụ mba ụwa nke sayensị na akụkọ ihe mere eme. 'Aargh!' Nnukwu azụ! 'Achọrọ m ịma otú anyị si chọpụta ha,' Ì ji n'aka na nke a adịghị mma? 'Ihe ha bụ n'ezie,' A ga - ekewa vitamin 13 ahụ ụzọ abụọ 'dịka anyị mụtara iji wuo ha,' N'abalị a, Walgreens na Target amalitela ngwaahịa niile na mba - yana otu ha siri dị mma. 'Vitamin niile' - nri niile ha na - egbu egbu n'ọtụtụ buru ibu. ' 'Anyị kwesịrị ịmalite iji nke a kpọrọ ihe, dịka anyị kwesịrị iji ọgwụ ọ bụla anyị tinyere' Abụ m onye sayensị.
Obukwa m nna ma achorom ima otu m ga esi eme ihe diri nwa m nwoke. Na otu ụbọchị ọ nwere ike iweta ọgwụ vitamin na Mars? N’ụwa nile, ụfọdụ ndị ọkachamara na-ekwu na ị takingụ vitamin pụrụ ichebe ndụ, ebe ndị ọzọ na-arụ ụka na ọ bụ nnọọ igbu oge ma ọ bụ ọbụna dị ize ndụ. Ya mere, olee otu anyi si mara ma iwere ha? ma ọ bụ ọ bụghị? Enwere m olile anya na ị nwere mmasị na trailer.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe nkiri ahụ, ị ​​nwere ike pịa aka nri ebe a ma ọ bụ njikọ dị na ala nke nkọwa ahụ. Enwere m olileanya na ị masịrị ya. Kwe ka m kwue n'okpuru mara ihe ị na-eche.
Kedu ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-a vitaminsụ ọtụtụ vitamin?
Ndị a bụ ole na olevitaminna-egosi na-egbu egbuọ bụrụburu oke ibu, yana mgbaàmà ha nke ịdoụbiga mmanya ókè:
-Gwè- ọgbụgbọ, oche ọbara, afọ ọsịsa, dizziness, isi ọwụwa, mmụba mmiri na ngụgụ na ahụ ọkụ.
VitaminA-Ọnwụ ntutu, mmebi imeju, nnukwu isi ọwụwa, mgbu ọkpụkpụ, ọhụụ na-ahụ ụzọ, akpọnwụ akpọnwụ na ịgba agbọ.
Olee vitamin ole kwa ụbọchị karịrị akarị?
'Ọtụtụ mmadụ chere na ọ dị mma ịnaraukwuudị ka ha chọrọ, 'ka Rosenbloom na-ekwu. 'Amaara m ndị na-ewere 10,000 mg aụbọchị. Otú ọ dị, njedebe a pụrụ ịnagide bụ 2,000 mg aụbọchị. 'Ndị nọ n'ihe ize ndụ maka nkume akụrụ nwere ike ibuwanye ihe egwu ahụ; ndị mmadụ nwekwara ike ịrịa afọ ọsịsa.
Anyị niile nwere ndị enyi na-a swearụ iyi site na usoro vitamin ha - ọgwụ vitamin C ha na-egbochi oyi, ma ọ bụ ihe mgbakwunye vitamin D ha na-ebuli mmụọ ha n'oge oyi. Ma ole n'ime nke ahụ bụ mmetụta placebo? “A na-atụ aro vitamin ndị na-esonụ maka ezigbo ahụ ike. Ma ị họọrọ iri ha site na nri na-edozi ahụ ma ọ bụ ngwa mgbakwunye ngwa ngwa dị gị n'aka.
Vitamin A dị ezigbo mkpa nye ahụ anyị ma ọ na - enyere aka karịa ịdebe anya anyị ike Mgbochi, usoro ọmụmụ, sel ahụike na anya. Ebe ọ bụ na vitamin A na-eso eme ka e nwee mkpụrụ ndụ ndị siri ike, ọ na-emetụta akụkụ ahụ anyị ndị dị mkpa dịka obi na akpa ume. Vitamin A na-abịa n’ụdị abụọ.
Nke mbu, enwere vitamin A dika preinol. Carotenoids ndị a na-enye ahụ anyị kpọmkwem vitamin A, a na-ahụkwa ha na isi mmalite anụmanụ dịka ngwaahịa mmiri ara ehi, azụ na anụ - ọkachasị n'ime imeju. Typedị nke ọzọ na-abịa n'ụdị provitamin A carotenoids dị ka beta-carotene na mkpụrụ osisi gbara ọchịchịrị na akwụkwọ nri dịka karọt, broccoli, melon, na ugu.
Ozugbo anyị riri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ndị a, ahụ anyị na-agbanwe vitamin A nke ewepụtara na vitamin A nke anụ ahụ anyị nwere ike iji. Imirikiti vitamin nwere vitamin A, ụmụ nwanyị kwesịrị ịchọ ihe ruru gram 3000 nke vitamin A kwa ụbọchị. Vitamin E A na - ekpughere anyị mgbe niile na ihe egwu na - adịghị emerụ ahụ site na mmetọ ikuku, ụzarị ultraviolet, ma ọ bụ naanị igwe ojii nke anwụrụ ọkụ n'okporo ámá.
Nke a bụ ihe kpatara na ọ dị oke mkpa ịnwe antioxidants na-agwọ ọrịa oge niile iji gbochie mkpụrụ ndụ anyị ka ọ ghara ịgbanwe ma kpatara ọrịa na-adịghị ala ala. Nke a bụ ebe vitamin E na-abanye. Anyị nwere ike ịnweta vitamin E site na nri anyị yana mgbakwunye nri.
Nri nwere abụba ndị dị mma dị ka mkpụrụ, mkpụrụ, na akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị na vitamin E. Ọ bụ ezie na vitamin E dị na mgbakwunye, anyị kwesịrị ịkpachara anya iji zere ọgwụ dị elu - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-ewere ihe ndị na-eme ka ọbara dị. Gbalịa inweta vitamin a site na nri gị ma ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye multivitamin.
Folate Folate so na otu ihe di na vitamin B, o bukwara onye obula mkpa, obughi ndi nwanyi di ime. Ọ nwere ike inye aka belata ọrịa obi ma melite nkà anyị na ahụike obi. Ebe ọ bụ na folic acid dị oké mkpa maka ahụike nke ụmụ ọhụrụ a na-amụbeghị amụ, ụmụ nwanyị niile na-atụle afọ ime ga-ahụrịrị na ha na-enweta afọ ojuju kwa ụbọchị.
Offọdụ n’ime isi nri folate kachasị mma bụ akwụkwọ nri, asparagus na Brussels na-epulite, ịghara ịkọwa mkpụrụ, agwa, ngwaahịa mmiri ara ehi, anụ, nri mmiri, na ọka iji tinye tọn ha n’ime nri gị; folic acid - ihe sịntetị nke folate - dịkwa na vitamin B na mgbakwunye yana dị na multivitamins. Vitamin CAh, Oge oyi na Ọrịa. Oge Vitamin C Na-efe na shelf Emergen-C, na ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị amasị ya iji gbochie ya ịjụ oyi, mana ọ nwere ike belata ya.
Ọ dịkwa mkpa maka ịkpụzi collagen - ihe na - eme ka ahụ gị na ọkpụkpụ gị sie ike. Dị ka vitamin E, vitamin C nwere antioxidants dị ike. Ndị mmadụ enweghị ike ịme vitamin C n'onwe anyị, yabụ anyị ga-eri ya kwa ụbọchị.
N'ezie, oranges bụ isi mmalite nke vitamin C, mana ya bụ mkpụrụ osisi citrus ndị ọzọ dị ka mkpụrụ osisi gram na lemọn, yana akwụkwọ nri dị ka ose na broccoli Iji nweta vitamin C kachasị maka ego gị, nwee mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri gị. Ebe ọ bụ na vitamin a bụ mmiri agbaze, ikpo ọkụ na isi nri gị nwere ike ibelata ogo vitamin nke ahụ gị nwere ike itinye. Citrus smoothie maka nri ụtụtụ? Ee, biko! Vitamin B6 Mmetụta Blue ma ọ bụ Blue Hụ na ị na-enweta vitamin B6 zuru ezu.
Vitamin B6 na - enyere ahụ aka ime serotonin na norepinephrine, kemikal na - enyere ụbụrụ aka izipu ozi. Enweghi vitamin B6 zuru oke nwere ike ibute akwara, akpụkpọ, na nsogbu ọbara. Ndị juri ahụbeghị mkpebi, ma nnyocha ụfọdụ ejikọtara ị takingụ mgbakwunye vitamin B6 na mgbaàmà PMS ka mma.
Vitaminlọ ọgwụ Mayo Clinic dị obere na-erughi obere vitamin B6, yabụ gbaa mbọ hụ na ị na-enweta nri zuru oke kwa ụbọchị. A na-ahụ ya na mkpo na akwụkwọ nri, mmiri ara ehi, chiiz, àkwá, na anụ, ma ọ bụ pasent kasị elu na azụ, imeju anụ, offal, na akwụkwọ nri starchy. N'ezie, ọ bụrụ na ụda offal eme gị queasy, e nwere mgbe B vitamin Mmeju dị.
A na-ahụkarị Vitamin B12 na ngwaahịa anụmanụ, Vitamin B12 na-enyere ahụ anyị aka ịmepụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie ọhụrụ. Ahụ anyị nwere ike ịchekwa vitamin B12 n'ime imeju anyị ruo afọ ole na ole, yabụ mara na onye ọ bụla ga-ewere nke a kwa ụbọchị Otu kwesịrị ileba anya na vitamin B12 mgbakwunye bụ ndị anaghị eri anụ. Vitamin B12 na-ejikọ protein na nri anyị ma achọtara ya na azụ, azụ azụ, anụ, akwa, na ngwaahịa mmiri ara ehi.
Maka nke a, ọ nwere ike isiri ndị anaghị eri anụ na ndị anaghị eri anụ ike ịnweta vitamin a. Ọ naghị apụtakarị na nri osisi, mana ugbu a, mkpụrụ ọka nwere vitamin B12. Vitamin D Ahụ anyị chọrọ vitamin D maka uto ọkpụkpụ dị mma.
A na-agbakwunye vitamin D na mgbakwunye calcium n'ihi na ọ na-enyere ahụ anyị aka ịmịkọrọ calcium.A erughị vitamin -D na-eduga n'adịghị ike, ọkpụkpụ na mgbu. N'adịghị ka vitamin ndị ọzọ dị na ndepụta a, vitamin D adịghị mfe inweta site na nri.
Anyị nwere ike ịnweta vitamin D site na mgbakwunye ma ọ bụ ahụ anyị nwere ike ịme ya ma ọ bụrụ na anyị mere Ngosiputa ìhè anyanwụ. Niile ị chọrọ bụ nkeji iri n’otu oge n’èzí iji chọta ihe ngwọta gị. Enwere ike ịchọta Vitamin D na ụfọdụ azụ mara abụba dị ka salmọn ma ọ bụ tuna, yana imeju beef, cheese, na nkochi ime akwa.
Ma gịnị kpatara ị ga-eji arụ ụka banyere ọgwụ anwụ na-acha kwa ụbọchị? CalciumHa ọ nwere mmiri ara? Calcium bụ mineral kachasị ukwuu na ahụ anyị ma mara ya mgbe niile maka ichebe ezé na ọkpụkpụ anyị, mana uru ya na-agbatị karịa ọkpụkpụ anyị. Ejikọtara calcium na nchekwa megide ọrịa kansa, ọrịa shuga na ọbara mgbali elu. Ọ na-enyere akwara na akwara arụ ọrụ nke ọma.
Calcium zuru oke dị mkpa karịsịa nye ụmụaka n’ihi na ọ bụrụ na ha enweghị ya, ha agaghị etoru ogo mmadụ. Ọbara anyị chọrọ ụfọdụ calcium. Yabụ mgbe ọ dị obere, ọbara anyị na-ewepụ ọkpụkpụ anyị.
Ọbara dị mma ma na-arụ ọrụ, mana na-eme ka ọkpụkpụ anyị daa mbà. N'ihi nke a, ọ dị mkpa iri nri juputara na calcium kwa ụbọchị, ọkachasị n'afọ iri na ụma gị. N'ezie, ngwaahịa mmiri ara ehi dị ka yogọt, cheese, na mmiri ara ehi bụ ezigbo isi mmalite, mana akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ, azụ, na ngwaahịa soy.
Magnesium bụ ịnweta nke anyị nwere ike ịnweta na nri, mgbakwunye, ma ọ bụ ọbụlagodi ọgwụ. Ahụ anyị chọrọ magnesium zuru oke iji mee ka akwara na akwara anyị Nọgide na-arụ ọrụ akwara. Magnesium na - enyekwa aka ịchịkwa ogo shuga dị n’ọbara na ọbara mgbali elu.
Ọ dịtụ mfe ịnweta magnesium site na nri anyị. Fọdụ nri ndị dị na magnesium gụnyere akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, akụ, mkpụrụ, na ọka niile. Achịcha ọka zuru oke kwesịrị ịdị na magnesium, ebe ụdị ndị ọzọ dị ka achịcha ọcha dị na magnesium ewepụla ọtụtụ n'ime ọdịnaya magnesium ha.
Anyị nwekwara ike nweta magnesium site na mgbakwunye. Ndị okenye kwesịrị ịchọ ihe dịka 270 ruo 400 milligram kwa ụbọchị. Ọ bụrụ n’ikpebie iwere mgbakwunye ahụ gbalịa, mee onwe gị - yana ezinụlọ gị - ihu ọma site na iri ya na nri gị iji gbochie afọ ọsịsa.
Ourgwè Ahụ anyị chọrọ ígwè kwa ụbọchị iji mepụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie ọhụrụ zuru ezu. Mkpụrụ ndụ ọbara ọbara anyị dịịrị maka Na-ebute oxygen ọhụrụ site na ahụ. Ọ bụrụ na anyị enweghị iron zuru oke, anyị nwere ike ịmalite ọrịa anaemia, na-ekwughi banyere enweghị ume, ume iku ume, yana nsogbu nsogbu.
Iji jide n’aka na ị na-enweta iron zuru oke, lezie anya maka ngwaahịa anụmanụ dịka anụ uhie uhie, ọkụkọ, tolotolo, na azụ. Womenmụ nwanyị kwesịrị ịchọrọ milligram 10 ruo 15 kwa ụbọchị, yabụ mgbe gị na dọkịta gị kpebiri na oge eruola ka ị gbakwunye mgbakwunye ígwè, gbaa mbọ hụ na ewere ya na afọ efu. Ya mere, anyi choro vitamin? Ndi okachamara anyi kwenyere na nri anyi bu uzo kachasi mma nke vitamin, nri ohuru na edozi ahu n’enye vitamin n’anyi.
Onye nlekọta ndị gbaara ndị dibia bekee Dr. Scott Schreiber lekwasịrị anya na iwepụta vitamin sitere na nri niile. Ọ na-ekwu, sị, “Mgbe ọ na-eto n’ala dị ka okike e bu n’uche, vitamin na mineral nọ n’ọnọdụ ha bụ́ nke na-adịkarị mfe nghọta.
Onye na-eri nri na-edozi ahụ Emily Braaten na-atụ aro ị nweta ọtụtụ vitamin na nri gị dị ka o kwere mee. Kpụrụ na-atụ aro servings nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri nwere ike ekpuchi ọtụtụ n'ime n'elu. Mgbe obula ichoro ibanye na ugbo elu vitamin, odi nkpa igwa onye na enye gi ahu ike.
Ọtụtụ ihe mgbakwunye vitamin nwere 100 pasent nke ego a na-atụ aro kwa ụbọchị, yabụ ọ bụrụ na ị ga-eri nri kwesịrị ekwesị nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ụbọchị niile, ị ga-eri ọtụtụ ihe karịa National Institute of Health na-atụ aro. O di nwute, abia na vitamin, inwere ike inwe otutu ihe. 'Kedu ihe bụ nke ahụ ?!' 'Mmiri!' 'Ọ jọgburu onwe ya!' Daalụ maka ikiri! Pịa akara ngosi ndepụta iji sonye na ọwa YouTube anyị.
Na mgbakwunye, lelee ihe ndị a niile dị jụụ nke anyị maara na ị ga-ahụkwa n'anya!
Enwere m ike iri vitamin 5 dị iche iche otu mgbe?
Gịnwere ike—Ọ ga-abụ na ọ bụghị ezigbo echiche. N'ihi na ụfọdụ Mmeju, ezigbo absorptionnwere ikedabere na oge nke ụbọchị. Ọ bụghị naanị nke ahụ—na-eweredoro anyavitamin, mineral, ma ọ bụ ihe mgbakwunye ndị ọzọ ọnụnwere ikenakwa belata absorption nanwere ikena-ebute mmekọrịta na-adịghị mma, nkenwere ikena-emerụ ahụ ike gị.June 10. 2020bọchị 2020
You na-ekpochapụ vitamin?
N'ihi na mmiri solublevitaminechekwaghị ya kama ọ ga-ewepụsite na mmamịrị,haO yikarịrị ka ọ ga-akpata nsogbu ọbụlagodi mgbe a na-ewere ya n'ọtụtụ dị elu. Otú ọ dị, na-ewere megadoses nke ụfọdụ mmiri-solublevitaminnwere ike ibute nsonaazụ dị egwu.Jenụwarị 20 2020bọchị 2020
Nwere ike iwere ọtụtụ ihe mgbakwunye na-emebi imeju gị?
Mgbe ewere n'imeihensonkeego akwadoro,vitaminenwebeghị nsogbunkeị inducedụ ọgwụ ọjọọumejimmerụ ahụ Ọbụna n'ọtụtụ dị elu, ọtụtụvitaminnwere obere oghom ihe ma gharaimerụ umeji.10.06.2021
You nwere ike ị drinkụ vitamin 2 n'otu oge?
Na-agwakọtamgbakwunye gaanaghị egbochikarị ọrụ hanan'ọnọdụ ụfọdụ nwere ike ịba uru, dịka ọmụmaatụvitaminC na-enyere iron absorption.
Kedu ihe mere pee m ji acha odo odo mgbe ọ nụsịrị vitamin?
Akwa ogwuvitaminnwere ike gbanwee gịpeekaenwu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ neonedo edoagba. Ihe kachasị na-akpata nsogbu bụvitaminB2, nke a makwaara dị ka riboflavin, nke a na-ahụ n'ọtụtụọtụtụ vitamin. Neon agba napeebụ naanị ihe na-egosi na ị bụ ọghọmna-ewerekarịa ahụ gị chọrọ, na ngafe na-agwakọta gịpee.Mar 12 2018
Ndi vitamin na-eme ihe ọ bụla?
Ndị nnyocha ahụ kwubiri naọtụtụ vitaminegbula ihe ize ndụ maka ọrịa obi, kansa, ndalata mmụọ (dị ka ncheta nchekwa na ichelata echiche) ma ọ bụ ọnwụ mbido. Ha kwukwara na n'ọmụmụ ihe gara aga,vitaminE na beta-carotene na-agbakwunye na-emerụ ahụ, ọkachasị na nnukwu doses.
Ndi biotin n’eme ka mmebi imeju?
Ihe data ndị a na-egosi na ịta ọgwụ nkebiotin meeanaghị emetụta kpochapụwommebi imejuule. Agbanyeghị, anyị enweghị ike iwepụ ma ọlị na mgbanwe akụkọ ihe mere eme a hụrụ ebe a nwere ike imetụtaumejiphysiology n'ụzọ ndị ọzọ.
Vitamin C ọ dị njọ maka imeju?
Uyarade ndomokiet idụhevitamin C, na physiologic ma ọ bụ na oke elu doses, na-akpata nnukwuumejimmerụ ma ọ bụ jaundice.05.27.2021
Ndi mmadu nwere ike inwu anwu site n’iri otutu vitamin?
Nwere ị vitaminsụ ọtụtụ vitamin ga-egbu egbu? Ọ bụ ezie na ọ dị oke ụkọ ịnwụ site na ịdoụbiga ọgwụ ike na vitamin, enwere akụkọ banyere ọnwụ metụtara vitamin toxicity. ). ). ). Overdubiga ókè ókè na vitamin ndị ọzọ pụkwara ịkpata mmetụta ndị na-akpata ọnwụ, dị ka mmebi imeju.
Mmadụ nwere ike ịdoụbiga mmanya ókè na mmiri mmiri nwere ike ịgbaze mmiri?
Ebe ọ bụ na anaghị echekwa vitamin ndị nwere ike ịme mmiri ma ọ bụ karịa na-ekpochapụ site na mmamịrị, ọ ga-abụ na ha agaghị ebute nsogbu ọbụlagodi mgbe a na-ewere ha n'ọtụtụ dị elu. Agbanyeghị, ịgadụ ọgwụ megadoses nke vitamin nwere ike ịgbasa mmiri nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu. ). ). Enwere vitamin anọ nwere ike ịgbanye abụba:
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - ewere vitamin D karịa?
Vitamin D. Ọrịa na-egbu egbu site na ị highụ nnukwu ọgwụ vitamin D nwere ike ibute mgbaàmà ndị dị egwu, gụnyere mgbatị ibu, ụkọ nri, na obi mgbawa oge ụfọdụ. O nwekwara ike ibuli ọkwa calcium, nke nwere ike ibute mmebi ahụ (21).